post အချိန်: 06-09-2021
ပတ် ၀ န်းကျင်စီစစ်ထားသောစာရွက်တစ်ရွက်ကို petri ပန်းကန်၏အောက်ခြေတွင် ထား၍ U-shaped ဖန်လှံတံကိုနေရာချပြီး၊ ဖန်လှံတံပေါ်တွင်သန့်ရှင်းသောဖန်ဆလိုက်နှစ်ခုကိုထားပါ။ ပိုးသတ်ပြီးနောက်, sterilized 20% ရေနံ - permeable ဖြေရှင်းချက်၏အနည်းငယ် milliliters aseptic ထုံးစံ၌ filter ကိုစက္ကူထည့်ပါ။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: 06-07-2021
နည်းလမ်းများ ၁။ တစ်ရှူးပိတ်ဆို့မှုကိုတစ်ခါသုံးထည့်ထားသောကက်ဆက်ထဲ၌၎င်းတွင်ရေးထားသည့်တစ်ရှူးနံပါတ်နှင့်ထည့်ပါ၊ ရေဓာတ်သေတ္တာ (သံမဏိ) ကိုဖုံးထားပါ၊ ၎င်းကိုရေခန်းခြောက်သည့်စက်ထဲသို့ရေစက်စက်ထဲသို့ထည့်ပါသို့မဟုတ်လက်ဖြင့်ယိုဖိတ်ပါ။ 2. အောက်ခြေအလွှာတွင်မြှုပ်ထားသောအောက်ခြေသေများကိုသိုလှောင်ထားပါ။ဆက်ဖတ်ရန် »
ကျယ်ပြန့်သော petri ပန်းကန် autoclave ကိုရောင်းချသည်
post အချိန်: 05-21-2021
စက်ရုံအတော်များများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Petri ပန်းကန်များအလိုအလျောက်သိုမှီးထားသည့်ဓာတ်ခွဲခန်း၊ Petri ဟင်းပွဲအမျိုးမျိုးကိုတင်ပြနိူင်သည်။ လာမည့်စီးပွားရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်စကားလုံးတစ်ဝှမ်းရှိစားသုံးသူများကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် တစ်ချိန်ကရွေးချယ်ထား, ထာဝရစံပြ! ကျနော်တို့သိသိသာသာ eff ရရှိပါသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: 03-30-2021
Petri ဟင်းလျာများကိုမူလက Julius Richard Petri (၁၈၅၂ မှ ၁၉၂၁)၊ ဂျာမန်ဇီဝဗေဒပညာရှင် Robert Koch လက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သောဘက်တီးရီးယားဗေဒပညာရှင်ကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကို“ Petri ဟင်းလျာများ” ဟုလည်းလူသိများသည်။ Petri ဟင်းလျာများသည်ပျက်စီးလွယ်ပြီးပျက်စီးလွယ်သောကြောင့်သူတို့ကိုဂရုတစိုက်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာဂရုစိုက်သင့်သည်။ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Covid-19 အတွက်လိုအပ်သောသုံးစွဲသူများအတွက် Filter Tips အတွက်စက်များစွာကိုမိတ်ဆက်ပါ
ယခုစစ်ထုတ်ရန်အကြံပေးချက်များ၏ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည် ၃၀၀၀ ဘူးစစ်စက်၏အကြံပေးချက်များဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် HUIDA သည် 10ul, 20ul, 50ul, 100ul, 100ul, 200ul, 1000ul, 1250ul နှင့် 5ml အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော filter pipette အကြံပေးချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်း - ပုံမှန်အထုပ် - အကြံပြုချက် ၉၆ ခု။ ဘောဂဗေဒအစီအစဉ် - သိကောင်းစရာ ၁၀၀၀ ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ Feat ...ဆက်ဖတ်ရန် »